रगत पसिनाले सिंचित जगमा ।
बनाएको आफ्नै घर ।
सभ्यता र संस्कृतिको -
प्रतीक बनेको आफ्नै घर ।
सौभाग्यको पर्याय रहेको हाम्रो घर !
भाग्य र भविष्यको प्रतीक हाम्रो घर !
कुनैवेला त्यही घरमा
विरानो जस्तो बन्यौं - हामी ,
हराएको जस्तो बन्यौं / बनाइयौं - हामी !
साँच्चै भनौं -
सभ्यता र संस्कृति सुरक्षित रहन्न कि भन्ने लाग्यो
भाग्य र भविष्यलाई कालो बादलले ढाक्छ कि भन्ने लाग्यो !
सौभाग्य लुटिए जस्तो लाग्यो
बाँच्न मुश्किलनै पर्छ कि भन्ने लाग्यो !
आज त्यही घरमा पुगेकाछौं !
मेरो प्रिय घर !
यही घरबाट आफ्नै अर्थी निस्कियोस् - मलाइ मन्जूर छ
तर सौभाग्यलाई चुक्न दिने छैन
स्वाभिमानलाई झुक्न दिनेछैन!
सभ्यता र संस्कृतिको रक्षाका लागि
झण्झावातसित जुध्न मन्जूर छ
तर , म हराउन सक्तिन - मेरो घर !
म छोड्न सक्तिन मेरो घर !!
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेको रचना ।